Ọkụ Otedọla: Gọọmentị Lagos achụfeela ụgbọala tanka n'otu ụzọ - BBC News Ìgbò
Ọkụ Otedọla: Gọọmentị Lagos achụfeela ụgbọala tanka n'otu ụzọ
1 Julaị 2018
Image copyright Lagos state government
Gọọmentị Legọs steeti ekwupụtala ihe ha chọpụtara na nyocha ha mere gbasara ọkụ ụgbọala tanka gbara ma gbuo ihe ruru mmadụ 9 ma gbaa ụgbọala 54 ọkụ n'akwa Otedola n'izu gara aga.
Ladi Lawanson bụ kọmishọna na-ahụ maka njem, kwuru sị na ihe ha chọpụtara bụ na tanka ahụ gbara ọkụ bu ibu karịrị ihe o kwesịrị ibu.
Lawanson kwuru sị "anyị chọpụtara na a rụrụ tanka ahụ n'afọ 1999 na mba Amerịka, mana ndị Naịjirịa rụgharịrị ya site n'ịbụ ihe bekee kpọrọ 'drilling rig' mezia ka ọ bụrụ ihe e ji ebu mmanụ ụgbọala.
A rụrụ ya ka ọ ghara ibu ibu karịrị tọn 15, mana ihe o bu bụ tọn 30."
Ọ pụtara na ndị na-anya tanka mmanụ karịrị gọọmentị?
Chi ji ehihie jie ka mmadụ itoolu, ụgbọala 54 gbara ọkụ na Legos
Ọkụ Otedola: Ị jụọla ese nwanne gị? Lee ihe ndị mmadụ mere
O kwuru nke a site n'akwụkwọ ozi nke Habib Aruna bụ ọnụ na-ekwuchitere gọọmentị binyere aka.
Gọọmentị Legọs kwuru n'akwụkọ ozi ahụ sị na iwu bụ na ụgbọala gwongworo maọbụ tanka ọbụla na-abata Legọs ga-enwerịrị asambodo gosiri na ahụ dị ya mma, nke ga-esi n'aka mịnịstrị na-ahụ maka njem, n'ime ụbọchị iri atọ na-abịa.
Gọọmentị Legọs steeti kwuputakwara na site ugbua gawa n'ihu, na tanka niile na-ebu mmanụ ụgbọala ga-ebido ịga naanị n'okporoụzọ a rụrụ maka ha nke bụ Apapa-Oworonshoki, nke si Ogudu gafee okporoụzọ Legọs-Ibadan.
Lawanson kwukwara na a chọpụtara na tanka ahụ gbara ọkụ esila n'aka fere n'aka ugboro 13 kemgbe ọ batara Naịjirịa.
Akwụkwọ ozi ahụ kwukwara na otu onye n'ime mmadụ anọ so na ndị merụrụ ahụ ha zọpụtara n'ọkụ ahụ anwụọla.
Ndị ọnụ na-eru n'okwu bịara ọgbakọ a gụnyere ndị si otu 'Nigeria Union of Petroleum and Natural Gas Workers', otu 'Association of Maritime Truck Owners', nke 'Petroleum Tanker Drivers', nke 'National Association of Transport Operators', nakwa 'Container Truck Owners Association of Nigeria'.
Ị ma omume 7 e ji ama ndị Naịjirịa na njem ụgbọelu?
2019: Anya asaala ndị mmadụ, ha na-ekwote ịnata PVC - INEC
Inec akwadola ọnọdụ 119,973 maka ntuliaka 2019
"Chineke gbaghara ndị buru akụkọ ụgha maka ọnwụ m"
'PEPEsoup' oke ọnụahịa Arsenal agbaala ụka n'azụ ụlọ ha